ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ဓားများ အကြောင်း - Thutazone
ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ဓားများ အကြောင်း
သမိုင်းဦးအစတွင် ဓားသည် လူသားများအတွက် မရှိမဖြစ် ပစ္စည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် ဓားများကို ဟင်းချက်သည့် နေရာများ၌သာ အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ဓားများကို အမဲလိုက်ရာတွင် လည်ကောင်း၊ အမှတ်တရ ပစ္စည်းအဖြစ် လည်းကောင်း အသုံးပြုနေကြဆဲ ဖြစ်သည်။ အချို့ဓားများသည် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သောကြောင့် အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းအောင် ဈေးကြီးလွန်းနေသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည့် တန်ဖိုးကြီးဓားများ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
၁၀. Yoshihiro Mizuyaki Honyaki
ဂျပန်နိုင်ငံမှ နာမည်ကျော် ဓားလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် Yoshihiro မှ ထုတ်လုပ်သည့် ဓားဖြစ်ပြီး၊ ဈေးအကြီးဆုံး ဓားစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံထားရသည်။ ဖီးနစ်ငှက်ကို ကိုယ်စားပြုထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓားပေါ်တွင်ပါသည့် လှိုင်းတွန့်များသည်လည်း ဖူဂျီတောင်ကိုလရောင်အောက်တွင်မြင်ရသည့်ပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားသည်။
၎င်းဓားကို ဂျပန်ရိုးရာကို အခြေခံပြီး ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် လှပသေသပ်သည်ကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ ဓားအရွယ်အစားမှာ အလယ်အလတ်ပုံစံဖြစ်ပြီး၊ ဓားအိမ်ကိုလည်း အနုပညာမြောက်အောင် ခြယ်သမှုများ ပြုလုပ်ထားသည်။ ဓားအိမ်ကို ယွန်းပညာဖြင့် အလှဆင်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ အလွန်ထက်မြအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ ယင်းဓား၏ တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၅၀၀၀) ကျော်အထိ ရှိသည်။
၉။ Lancet Ouroboros
တန်ဖိုးကြီးအသုံးအဆောင်များကို ထုတ်လုပ်ရာမှာ နာမည်ကြီးသည့် William Henry မှ လက်မှုပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ဓားဖြစ်သည်။ ဓားအရွယ်အစားမှာ သေးငယ်သော်လည်း ရွှေ၊ ကြေးစသည့်အရာများ ပါဝင်သောကြောင့် တန်ဖိုးကြီးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဓားတွင်ပါဝင်သည့် အလှအပများသည် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်သည်။
ဓားအိမ်ကို ခေါင်းသုံးခေါင်း ပါဝင်သည့် နဂါးရုပ်ကို ရေးထွင်းထားသည်။ ဓားပေါ်တွင်လည်း အနုစိတ်သည့် လက်ရာများကို တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ နာမည်ကျော် ဒါးမားစကပ်စတီး နဲ့ ဓားကို ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၅၅၀၀) ဖြစ်သည်။
၈. Nenohi Honyaki Dentokougeishi Sakimaru Takobiki
ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်သည့် တန်းဖိုးကြီးဓားဖြစ်သည်။ ဓားရှည်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဓားအရှည် မှာ (၁၅ ဒသမ ၄) လက်မအထိ ရှိသည်။ လက်ရာကောင်းမွန်သည့် ဓားဖြစ်ပြီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်ကြောင်းကို သိရှိရန် အထိမ်းအမှတ်များကို ထည့်သွင်းထားသည်။ ဓားအိမ်ကို ယွန်းပညာဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ချယ်ရီပန်းများဖြင့် အလှဆင်ထားသည်။
သံဖြူဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး၊ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် ဓားတစ်လက် ဖြစ်သည်။ ဓားလက်ကိုင် နေရာကိုလည်း စိတ်ဝင်စားအောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၆၉၈၀) ဖြစ်သည်။
၇. Black Panther Knife
လက်ရာကောင်းမွန်သည့် ဓားဖြစ်ပြီး၊ သာမန်ထက်ပိုနေသဖြင့် တန်ဖိုးကြီး စာရင်းဝင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဓားကို အချိန်ယူပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သစ်နက်ကောင်၏ ဦးခေါင်းပုံစံကို ရေးထိုးမှု ပြုလုပ်ထားသည်။ ဓားတွင်ရွှေများကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။
ဓားအိမ်ကို အနုပညာမြောက်အောင် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါးမားစကပ်စတီး နဲ့ ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သည့် ဓားတစ်လက် ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၈၁၅၀) ဖြစ်သည်။
၆. Gentak Makara Knife
တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းများနှင့် အနုပညာမြောက်အောင် ဖန်တီးထားသည့် ဓားဖြစ်သည်။ ဝီလျံဟင်နရီမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဓားဖြစ်သည်။ ဓားပေါ်တွင် ရေးထွင်းထားသည့် လက်ရာသည့် အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်သည်။ ပန်းပဲအတတ်ပညာဖြင့် လှပအောင် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဓားကို လက်မှုပညာဖြင့် အနုစိတ် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းဓားကို အကောင်းစားသံ၊ သစ်ချပင်၊ ရွှေ စသည့်တို့ကို ရောစပ်ပြီး အကောင်းဆုံး ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးကြီးဓား စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခံထားရပြီး တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၁၂၅၀၀) ဖြစ်သည်။
၅.Monarch Steampunk Dragon Knife
နာမည်ကျော် ဓားထုတ်လုပ် သူသုံးဦး(William Henry, Mark Hoescht and Mike Norris) တို့ ပူးပေါင်း ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းဓားကို ဖန်တီးရာတွင် အကောင်းဆုံးအရာများ ပါဝင်အောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါးမားစကပ်စတီး ကို (၂၄) ကာရက်ရှိသည့် ရွှေဖြင့် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဓားတစ်ချောင်း ဖြစ်သော်လည်း အနုပညာ မြောက်အောင် ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ လက်မှုပညာဖြင့် အချိန်ယူ ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် တန်ဖိုးကြီးဓား အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ တန်ဖိုးမှာဒေါ်လာ (၁၈၅၀၀) ဖြစ်သည်။
၄. Spearpoint Lace Knife
ဝီလျံဟင်နရီ၏ နောက်ထပ်ဖန်တီးမှု ဓားတစ်ချောင်းဖြစ်သည်။ ဓားမှာ သေးငယ်သော်လည်း နာရီပေါင်းများစွာ ခက်ခက်ခဲခဲ ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပန်းပဲအတတ်ပညာဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ဓားပေါ်ရှိက နုတ်ပန်းများကို လက်မှုပညာဖြင့် အချိန်ယူ ရေးထိုးခဲ့ရသည်။ (၂၄) ကာရက်ရှိသည့် ရွှေနှင့် ဒါးမားစကပ်စတီး တို့ကို ပေါင်းစပ်ပြီး ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သီးသန့်ထုတ်လုပ်သည့် ဓားဖြစ်ပြီး နောက်မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာအထိ ဂုဏ်ယူစွာ သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ နာရီပေါင်း ရာနဲ့ချီကာ အချိန်ယူဖန်တီးထားခြင်းကြောင့် ဓားတစ်ချောင်း တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ (၂၅၀၀၀) အထိ ရှိသည်။
၃. Nesmuk Diamond Studded Knife
ကွင်တန်နီလ်နှင့် ဟော့ဖန်တို့ နှစ်ဦး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့် ဓားဖြစ်ပြီး၊ အထက်ဆုံး ဓားတစ်ချောင်း အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဓားလက်ကိုင်နေရာတွင် စိန်များ ထည့်သွင်းထားသဖြင့် တန်ဖိုးကြီးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။
ဓားတစ်ချောင်းတန်ဖိုးမှာ ကားသစ်တစ်စီးနီးပါး ဖြစ်နေသည်။ ယင်းဓားကိုဒေါ်လာ (၄၀၀၀၀) အထိ သတ်မှတ်ထားသည်။ ဓားကို အကောင်းဆုံးအရာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ စိန်ရှစ်လုံးပါဝင် ပြီး ဓားကို တိုက်တေနီယမ် သုတ်ထားပြီး ကာဘွန်စတီးလ်ကို အသုံးပြု ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Nesmuk မှ ဖန်တီးသည့် နောက်ထပ် အကောင်းဆုံးလက်ရာ ဖြစ်သည်။ နောက်ဖေးမီဖိုချောင်သုံး ဓားများတွင် ဈေးအကြီးဆုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ အကောင်းဆုံးအရာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် တန်ဖိုးမှာ ဒေါ်လာ(၁၀၀၀၀၀) နီးပါးရှိသည်။
အထူးခြားဆုံးမှာ ဓားလက်ကိုင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်း (၅၀၀၀) သက်တမ်းရှိသည့် ဝက်သစ်ချပင်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပလက်တီနမ်နှင့် စိန်ပွင့်များကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ ဒါးမားစကပ်စတီး ကို အခြေခံပြုလုပ်ထားသည့် ဓားကောင်း တစ်လက် ဖြစ်သည်။
၁. The Gem Of The Orient
အမည်နှင့်လိုက်ဖက်သည် ဓား ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ နီဗာဒါးတွင် နေထိုင်သည့် ဘတ်စတာ ဝါရင်စကီးက ပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တန်ဖိုးအကြီးဆုံး ဓားတစ်လက်အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ ဓားကို ပြုလုပ်ရာတွင် အနည်းဆုံး (၁၀) နှစ် အချိန်ယူခဲ့ရပြီး၊ လေလံပွဲတွင် ရောင်းချခဲ့ရာ ဒေါ်လာ (၂ ဒသမ ၁) သန်းရရှိခဲ့သည်။
ယင်းဓားကို မြ ( ၁၅၃) ပွင့်၊ စိန် (၉) ပွင့် ပါဝင်ပြီးရွှေနှင့် ကျောက်စိမ်း တို့ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဓား၏တန်ဖိုးမှာ မြင့်တက်သွားခြင်း ဖြစ်ပြီး လက်ရာမှာလည်း အလွန်ကောင်းမွန်သည်။
ယနေ့ခေတ် ဆေးသိပ္ပံရဲ့ ဖခင်ကြီး ဝီလီယမ် ဟာဗေး